वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहन्छ ? अब अनलाइनबाटै श्रम इजाजत लिन सकिनेछ, फारम कसरी भर्ने ? - Jaagirkhane
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहन्छ ? अब अनलाइनबाटै श्रम इजाजत लिन सकिनेछ, फारम कसरी भर्ने ?
१० मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सरकारले श्रम इजाजत जारी गर्न अब लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नै लागेको छ । सरकारले अब अनलाइन सिस्टमबाटै श्रम इजाजत लिने प्रणालीको सुरुवात गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलो चरणमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको हो । अबको १० दिनभित्र यस्तो सुविधा सहितको अनलाइन सिस्टम सुरुवात गरिने विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।